Isku-darka Foojarka, Kuuboon, iyo Xalka Koodh-dhimista
Jimco, Juun 15, 2016 Monday, July 18, 2016 Douglas Karr
Koodhadh dhimista ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu sasabto booqdahaaga inuu xidho. Hadday tahay qiimo dhimis ballaaran ama dhoofinta bilaashka ah, sicir-dhimistu waxay sameyn kartaa farqiga oo dhan. Waagii hore, annaga ayaynu ku dhisnay iyaga oo adeegsanaya noocyada barcode ka dibna ku raadjoogno cinwaanka emaylka. Ma ahayn wax lagu farxo… gaar ahaan marka aad ku darto kakanaanta furashooyinka badan, wadaagista koodhka, iwm. Intaa waxaa sii dheer, noocyada xarfaha ayaa si fiican uga shaqeeyay khadka tooska ah, laakiin waa inaan dhisno sawir ah